Tonga ao Maraoka ny “Diaben’ireo vehivavy ratsy fitondrantena” · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 16 Janoary 2019 5:10 GMT
“Miarova tena samirery, takio ny fanajàna. Tsy maintsy miova lasy ny henatra !” io no hiakam-pitoloman'i Majdoline Lyazidi, tovovavy iray 20 taona namorona ny SlutWalk Maroc, pejy Facebook natokany hanairana ny saina amin'ireo fanorisorenana ara-nofo ao anatin'ny fiarahamonina maraokanina. Toa tafita ny hafatra: mpikambana telo arivo no efa ao anatiny hatramin'ny nanombohana azy, tsy ampy 15 andro akory.
Ny 3 Aprily 2011 tao Toronto, Kanadà no nanomboka ny ‘”Diaben'ireo vehivavy ratsy fitondrantena“, ho toy ny hetsika iray hanoherana ireo manome rariny ny fanolanana ho toy ny natosiky ny fitafy anaovan'ireo vehivavy voaolana. Fanambaràna iray niteraka resabe nataonà manamboninahitra iray tao amin'ny polisy no niaingàn'ny zavatra rehetra, izay niteny teo anoloan'ireo tovovavy mpianatra hoe mba hiarovana ny tena manoloana ireo mpanolana dia “tokony hosorohan'ireo tovovavy ny fanaovana fitafy toy ny vehivavy ratsy fitondrantena”. Vetivety ilay hetsika dia niparitaka eran'izao tontolo izao, niaraka tamin'ireo diabe sy fihetsiketsehana nokarakaraina tao Sidney, Londona.
Tao anaty antsafa iray niarahana tamin'ilay Maraokàna bilaogera iray hafa, Hind, manazava izay antony manosika azy hanao izany i Majdoline :
Majdoline manaiky ihany koa fa mametraka olana ny anarana entin'ilay fanentanana :
Miabo ny ankamaroan'ireo fanehoankevitra momba ny vondrona SlutWalk Maroc, saingy misy ihany kiana vitsivitsy. Nanafintohina ilay bilaogera Youssef Boukhouya ny nanombohana ilay vondrona tao anatin'ny volana Ramadàny. Manoratra izy :
Anisan'ireo manohana ny SlutWalk Morocco, ny bilaogera Mahmoud Khattab izay manazava ny antony anekeny azy io :
Tao anaty antsafa iray ho an'ny gazety maraokàna, milaza i Majdouline fa hijanona ho tsy miankina ny vondrona misy azy, saingy hisy ny fifandraisana hatao amin'ireo fikambanana mpiaro vehivavy sy ireo fikambanana izay miaro ny zo maha-olona mba hampandraisana anjara azy ireny amin'ilay diabe voalohany.